Miyuu Aqalka Kremlin-ka isku dayayaa inuu Donald Trump mar labaad hogaamiyo Mareykanka? xiriir miyey xukuumadda Beijing la leedahay Biden? Su’aalahasi ayay isweydinayaan bulshada sirddoonka Mareykanka. Qiimeyn ka timaaday sarkaal sare ayaa ka digeysa in quwadaha ajaanibta ah ay isku dayayaan iney qaadaan tallaabooyin ay ku doonayaan in ay saameyn ku yeeshaan doorashada Nofeembar gaar ahaan wax isdaba marin lagu sameeyo codbixyeyaasha, dalalkaasi ayaa la sheegay iney Shiinaha, Ruushka iyo Iran. Saddexda dal ayaanan isku hadaf ahayn oo mid kaste dantiisa gaarka ayuu eeganayaa. RUUSHKA Maxay yiradeen sirdoonka Mareykanka ? Sidaad ogtahayba Ruushka ayaa ku lug lahaa doorashadii 2016-ka, iyo wixii ka dambeeyayba. Sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in Ruusha isku dayayo inuu saameyn ku yeesho codadka isagoo u xaglinayo Donald Trump. Waxay sirdoonka farta ku fiiqeen in Ruushka uu qorsheynayo weerar dhanka internet-ka ah sidii doorashadii horeba looga shakiyay inuu sameeyay. Bishii la soo dhaafay sanatar ka tirsan xisbiga Republican-ka ayaa taageeray fikradda ah in Ruushka uu doonayay inuu doorashada Trump ku guuleysto. Madaxweyne Putin iyo Trump XIGASHADA SAWIRKA,REUTERS Qoraalka sawirka, Madaxweyne Putin iyo Trump Doorashadan 2020-ka waxaa booska Hillary Clinton ku jira Joe Biden. Waxaana laga cabsi qabaa in Ruushka uu dadaal ku bixiyo sidii marlabaad uu Trump ku guuleysan lahaa. Christopher Wray, oo ah madaxa FBI ayaa aaminsan in Ruushka uusan weligii joojin farogelinta doorashada Mareykanka xitaa markii Trump la doortay oo waxaa uu lug lahaa doorashooyinkii xubnaha congress-ka ee sannadkan. Safiirka Ruushka ee Turkiga ayaa toogasho lagu dilay Trump oo casuumay Obama walaalkiis Kaftan uu yiri Madaxweyne Donald Trump oo dad badan ka yaabiyay Hase yeeshee Ruushka ayaa si joogta ah u dafiriyay faroelinta doorashooyinka dalalka ajinabiga ah. SHIINAHA Maxay yiradeen sirdoonka Mareykanka ? Saraakiisha sarsare ee maamulka Trump ayaa ku doodayaa in Shiinaha uu sannadkan ka khatar badan yahay Ruushka marka laga hadlayo farogelinta doorashada Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee William Barr ayaa sheegay in Shiinaha uu door bidayo in aanan Trump dib loo soo dooran. Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping XIGASHADA SAWIRKA,REUTERS Qoraalka sawirka, Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping “Shiinaha ayaa ballaarinayo dadaallada uu ku doonayo saameyntiisa siyaadda Mareykanka.” Waxaa aad loo ilaaniyaa weerarda ka imaan kara dhanka internet-ka inkastoo farogelinta Shiinaha ay aad u hormarsan tahay.” IRAN Maxay yirahdeen sirddoonka Mareykanka? Warbixin ayuu Mr Evanina ku sheegay in xukuumadda Tehran ay kasoo horjeedo in madaxweyne Trump uu mar labaad ku soo laabto Aqalka Cad. Waxa uu sheegay in Iran ay diiradda saareyso sidii ay baraha bulshada ugu faafin lahayd macluumaad been abuur ah oo la xiriira doorashada Mareykanka. Eedeymaha sirddoonka ayaa waxaa sii xoojinaya shirakadda Microsoft oo sheegtay in burcadda dhanka internetka ee xiriirka la leh dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Iran ay isku dayayaan iney basaasaan arrimaha doorashada Mareykanka. Kooxda Iran ee loo yaqaan Phosphorus ayaa la sheegay iney ku guul dareysteen iney gudaha u galaan cinwaanada saraakiisha Aqalka Cad iyo shaqaalaha doorashada u qaabilsan Trump. Isku daygaan ayaa la sheegay iney sameeyeen intii u dhaxeeysay bishii May iyo June ee sannadkan. Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani XIGASHADA SAWIRKA,REUTERS Qoraalka sawirka, Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani Sarkaal ka tirsan wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa warbixinta shirkadda Microsoft ku tilmaamay mid aanu waxba ka jirin. “Iran ma khuseeyo cidda ku guuleysata doorashada Mareykanka,” ayuu yiri Saciid Khatibzadeh. | Somalilandhorta
Browse: Home / Miyuu Aqalka Kremlin-ka isku dayayaa inuu Donald Trump mar labaad hogaamiyo Mareykanka? xiriir miyey xukuumadda Beijing la leedahay Biden? Su’aalahasi ayay isweydinayaan bulshada sirddoonka Mareykanka. Qiimeyn ka timaaday sarkaal sare ayaa ka digeysa in quwadaha ajaanibta ah ay isku dayayaan iney qaadaan tallaabooyin ay ku doonayaan in ay saameyn ku yeeshaan doorashada Nofeembar gaar ahaan wax isdaba marin lagu sameeyo codbixyeyaasha, dalalkaasi ayaa la sheegay iney Shiinaha, Ruushka iyo Iran. Saddexda dal ayaanan isku hadaf ahayn oo mid kaste dantiisa gaarka ayuu eeganayaa. RUUSHKA Maxay yiradeen sirdoonka Mareykanka ? Sidaad ogtahayba Ruushka ayaa ku lug lahaa doorashadii 2016-ka, iyo wixii ka dambeeyayba. Sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in Ruusha isku dayayo inuu saameyn ku yeesho codadka isagoo u xaglinayo Donald Trump. Waxay sirdoonka farta ku fiiqeen in Ruushka uu qorsheynayo weerar dhanka internet-ka ah sidii doorashadii horeba looga shakiyay inuu sameeyay. Bishii la soo dhaafay sanatar ka tirsan xisbiga Republican-ka ayaa taageeray fikradda ah in Ruushka uu doonayay inuu doorashada Trump ku guuleysto. Madaxweyne Putin iyo Trump XIGASHADA SAWIRKA,REUTERS Qoraalka sawirka, Madaxweyne Putin iyo Trump Doorashadan 2020-ka waxaa booska Hillary Clinton ku jira Joe Biden. Waxaana laga cabsi qabaa in Ruushka uu dadaal ku bixiyo sidii marlabaad uu Trump ku guuleysan lahaa. Christopher Wray, oo ah madaxa FBI ayaa aaminsan in Ruushka uusan weligii joojin farogelinta doorashada Mareykanka xitaa markii Trump la doortay oo waxaa uu lug lahaa doorashooyinkii xubnaha congress-ka ee sannadkan. Safiirka Ruushka ee Turkiga ayaa toogasho lagu dilay Trump oo casuumay Obama walaalkiis Kaftan uu yiri Madaxweyne Donald Trump oo dad badan ka yaabiyay Hase yeeshee Ruushka ayaa si joogta ah u dafiriyay faroelinta doorashooyinka dalalka ajinabiga ah. SHIINAHA Maxay yiradeen sirdoonka Mareykanka ? Saraakiisha sarsare ee maamulka Trump ayaa ku doodayaa in Shiinaha uu sannadkan ka khatar badan yahay Ruushka marka laga hadlayo farogelinta doorashada Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee William Barr ayaa sheegay in Shiinaha uu door bidayo in aanan Trump dib loo soo dooran. Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping XIGASHADA SAWIRKA,REUTERS Qoraalka sawirka, Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping “Shiinaha ayaa ballaarinayo dadaallada uu ku doonayo saameyntiisa siyaadda Mareykanka.” Waxaa aad loo ilaaniyaa weerarda ka imaan kara dhanka internet-ka inkastoo farogelinta Shiinaha ay aad u hormarsan tahay.” IRAN Maxay yirahdeen sirddoonka Mareykanka? Warbixin ayuu Mr Evanina ku sheegay in xukuumadda Tehran ay kasoo horjeedo in madaxweyne Trump uu mar labaad ku soo laabto Aqalka Cad. Waxa uu sheegay in Iran ay diiradda saareyso sidii ay baraha bulshada ugu faafin lahayd macluumaad been abuur ah oo la xiriira doorashada Mareykanka. Eedeymaha sirddoonka ayaa waxaa sii xoojinaya shirakadda Microsoft oo sheegtay in burcadda dhanka internetka ee xiriirka la leh dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Iran ay isku dayayaan iney basaasaan arrimaha doorashada Mareykanka. Kooxda Iran ee loo yaqaan Phosphorus ayaa la sheegay iney ku guul dareysteen iney gudaha u galaan cinwaanada saraakiisha Aqalka Cad iyo shaqaalaha doorashada u qaabilsan Trump. Isku daygaan ayaa la sheegay iney sameeyeen intii u dhaxeeysay bishii May iyo June ee sannadkan. Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani XIGASHADA SAWIRKA,REUTERS Qoraalka sawirka, Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani Sarkaal ka tirsan wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa warbixinta shirkadda Microsoft ku tilmaamay mid aanu waxba ka jirin. “Iran ma khuseeyo cidda ku guuleysata doorashada Mareykanka,” ayuu yiri Saciid Khatibzadeh.
Miyuu Aqalka Kremlin-ka isku dayayaa inuu Donald Trump mar labaad hogaamiyo Mareykanka? xiriir miyey xukuumadda Beijing la leedahay Biden? Su’aalahasi ayay isweydinayaan bulshada sirddoonka Mareykanka. Qiimeyn ka timaaday sarkaal sare ayaa ka digeysa in quwadaha ajaanibta ah ay isku dayayaan iney qaadaan tallaabooyin ay ku doonayaan in ay saameyn ku yeeshaan doorashada Nofeembar gaar ahaan wax isdaba marin lagu sameeyo codbixyeyaasha, dalalkaasi ayaa la sheegay iney Shiinaha, Ruushka iyo Iran. Saddexda dal ayaanan isku hadaf ahayn oo mid kaste dantiisa gaarka ayuu eeganayaa. RUUSHKA Maxay yiradeen sirdoonka Mareykanka ? Sidaad ogtahayba Ruushka ayaa ku lug lahaa doorashadii 2016-ka, iyo wixii ka dambeeyayba. Sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in Ruusha isku dayayo inuu saameyn ku yeesho codadka isagoo u xaglinayo Donald Trump. Waxay sirdoonka farta ku fiiqeen in Ruushka uu qorsheynayo weerar dhanka internet-ka ah sidii doorashadii horeba looga shakiyay inuu sameeyay. Bishii la soo dhaafay sanatar ka tirsan xisbiga Republican-ka ayaa taageeray fikradda ah in Ruushka uu doonayay inuu doorashada Trump ku guuleysto. Madaxweyne Putin iyo Trump XIGASHADA SAWIRKA,REUTERS Qoraalka sawirka, Madaxweyne Putin iyo Trump Doorashadan 2020-ka waxaa booska Hillary Clinton ku jira Joe Biden. Waxaana laga cabsi qabaa in Ruushka uu dadaal ku bixiyo sidii marlabaad uu Trump ku guuleysan lahaa. Christopher Wray, oo ah madaxa FBI ayaa aaminsan in Ruushka uusan weligii joojin farogelinta doorashada Mareykanka xitaa markii Trump la doortay oo waxaa uu lug lahaa doorashooyinkii xubnaha congress-ka ee sannadkan. Safiirka Ruushka ee Turkiga ayaa toogasho lagu dilay Trump oo casuumay Obama walaalkiis Kaftan uu yiri Madaxweyne Donald Trump oo dad badan ka yaabiyay Hase yeeshee Ruushka ayaa si joogta ah u dafiriyay faroelinta doorashooyinka dalalka ajinabiga ah. SHIINAHA Maxay yiradeen sirdoonka Mareykanka ? Saraakiisha sarsare ee maamulka Trump ayaa ku doodayaa in Shiinaha uu sannadkan ka khatar badan yahay Ruushka marka laga hadlayo farogelinta doorashada Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee William Barr ayaa sheegay in Shiinaha uu door bidayo in aanan Trump dib loo soo dooran. Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping XIGASHADA SAWIRKA,REUTERS Qoraalka sawirka, Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping “Shiinaha ayaa ballaarinayo dadaallada uu ku doonayo saameyntiisa siyaadda Mareykanka.” Waxaa aad loo ilaaniyaa weerarda ka imaan kara dhanka internet-ka inkastoo farogelinta Shiinaha ay aad u hormarsan tahay.” IRAN Maxay yirahdeen sirddoonka Mareykanka? Warbixin ayuu Mr Evanina ku sheegay in xukuumadda Tehran ay kasoo horjeedo in madaxweyne Trump uu mar labaad ku soo laabto Aqalka Cad. Waxa uu sheegay in Iran ay diiradda saareyso sidii ay baraha bulshada ugu faafin lahayd macluumaad been abuur ah oo la xiriira doorashada Mareykanka. Eedeymaha sirddoonka ayaa waxaa sii xoojinaya shirakadda Microsoft oo sheegtay in burcadda dhanka internetka ee xiriirka la leh dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Iran ay isku dayayaan iney basaasaan arrimaha doorashada Mareykanka. Kooxda Iran ee loo yaqaan Phosphorus ayaa la sheegay iney ku guul dareysteen iney gudaha u galaan cinwaanada saraakiisha Aqalka Cad iyo shaqaalaha doorashada u qaabilsan Trump. Isku daygaan ayaa la sheegay iney sameeyeen intii u dhaxeeysay bishii May iyo June ee sannadkan. Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani XIGASHADA SAWIRKA,REUTERS Qoraalka sawirka, Madaxweynaha Iran Hassan Rouhani Sarkaal ka tirsan wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa warbixinta shirkadda Microsoft ku tilmaamay mid aanu waxba ka jirin. “Iran ma khuseeyo cidda ku guuleysata doorashada Mareykanka,” ayuu yiri Saciid Khatibzadeh.
Posted by Yasmin Ahmed on October 6, 2020 in Qoraalo(Articles), Ra'yi(Opinion) | 11 Views | Leave a response
Miyuu Aqalka Kremlin-ka isku dayayaa inuu Donald Trump mar labaad hogaamiyo Mareykanka? xiriir miyey xukuumadda Beijing la leedahay Biden?
Su’aalahasi ayay isweydinayaan bulshada sirddoonka Mareykanka. Qiimeyn ka timaaday sarkaal sare ayaa ka digeysa in quwadaha ajaanibta ah ay isku dayayaan iney qaadaan tallaabooyin ay ku doonayaan in ay saameyn ku yeeshaan doorashada Nofeembar gaar ahaan wax isdaba marin lagu sameeyo codbixyeyaasha, dalalkaasi ayaa la sheegay iney Shiinaha, Ruushka iyo Iran.
Saddexda dal ayaanan isku hadaf ahayn oo mid kaste dantiisa gaarka ayuu eeganayaa.
Maxay yiradeen sirdoonka Mareykanka ?
Sidaad ogtahayba Ruushka ayaa ku lug lahaa doorashadii 2016-ka, iyo wixii ka dambeeyayba.
Sirdoonka Mareykanka ayaa aaminsan in Ruusha isku dayayo inuu saameyn ku yeesho codadka isagoo u xaglinayo Donald Trump. Waxay sirdoonka farta ku fiiqeen in Ruushka uu qorsheynayo weerar dhanka internet-ka ah sidii doorashadii horeba looga shakiyay inuu sameeyay.
Bishii la soo dhaafay sanatar ka tirsan xisbiga Republican-ka ayaa taageeray fikradda ah in Ruushka uu doonayay inuu doorashada Trump ku guuleysto.
Madaxweyne Putin iyo Trump
Doorashadan 2020-ka waxaa booska Hillary Clinton ku jira Joe Biden. Waxaana laga cabsi qabaa in Ruushka uu dadaal ku bixiyo sidii marlabaad uu Trump ku guuleysan lahaa.
Christopher Wray, oo ah madaxa FBI ayaa aaminsan in Ruushka uusan weligii joojin farogelinta doorashada Mareykanka xitaa markii Trump la doortay oo waxaa uu lug lahaa doorashooyinkii xubnaha congress-ka ee sannadkan.
Hase yeeshee Ruushka ayaa si joogta ah u dafiriyay faroelinta doorashooyinka dalalka ajinabiga ah.
Saraakiisha sarsare ee maamulka Trump ayaa ku doodayaa in Shiinaha uu sannadkan ka khatar badan yahay Ruushka marka laga hadlayo farogelinta doorashada Mareykanka.
Xeer ilaaliyaha guud ee William Barr ayaa sheegay in Shiinaha uu door bidayo in aanan Trump dib loo soo dooran.
Madaxweynaha Shiinaha, Xi Jinping
“Shiinaha ayaa ballaarinayo dadaallada uu ku doonayo saameyntiisa siyaadda Mareykanka.” Waxaa aad loo ilaaniyaa weerarda ka imaan kara dhanka internet-ka inkastoo farogelinta Shiinaha ay aad u hormarsan tahay.”
Maxay yirahdeen sirddoonka Mareykanka?
Warbixin ayuu Mr Evanina ku sheegay in xukuumadda Tehran ay kasoo horjeedo in madaxweyne Trump uu mar labaad ku soo laabto Aqalka Cad.
Waxa uu sheegay in Iran ay diiradda saareyso sidii ay baraha bulshada ugu faafin lahayd macluumaad been abuur ah oo la xiriira doorashada Mareykanka.
Eedeymaha sirddoonka ayaa waxaa sii xoojinaya shirakadda Microsoft oo sheegtay in burcadda dhanka internetka ee xiriirka la leh dalalka Ruushka, Shiinaha iyo Iran ay isku dayayaan iney basaasaan arrimaha doorashada Mareykanka.
Kooxda Iran ee loo yaqaan Phosphorus ayaa la sheegay iney ku guul dareysteen iney gudaha u galaan cinwaanada saraakiisha Aqalka Cad iyo shaqaalaha doorashada u qaabilsan Trump. Isku daygaan ayaa la sheegay iney sameeyeen intii u dhaxeeysay bishii May iyo June ee sannadkan.
Sarkaal ka tirsan wasaaradda Arrimaha Dibadda Iran ayaa warbixinta shirkadda Microsoft ku tilmaamay mid aanu waxba ka jirin. “Iran ma khuseeyo cidda ku guuleysata doorashada Mareykanka,” ayuu yiri Saciid Khatibzadeh.